Igumbi leSapho eliMgangatho eKushi Beach eRameswaram - I-Airbnb
Igumbi leSapho eliMgangatho eKushi Beach eRameswaram
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguVenkataraman Chettiar
I-Kushi Beach Resort yeyona ndawo ifanelekileyo nokuba yindawo yolwakhiwo, ulwandle olukufutshane, ukukhwela isikhephe kulwandle lwase-Ariyaman kunye neendawo zokutyela ezintle okanye uhlala e-Thangis Kitchen, uya kuba nakho ukwenza konke kule ndawo yokuhlala yeholide.
Indawo efanelekileyo yokuphumla kosapho lonke kwaye yonwabele isanti ecocekileyo kunye nolwandle oluzolileyo olucace kakhulu. Iimbono ezinoxolo, ezolileyo, ezikufutshane namanzi, zizolile kwaye ziphumle.
Zizise nje wena, abantu obathandayo okanye usapho lwakho kwaye wonwabele eyona holide ibalaseleyo. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide zixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye zisondele kwiintliziyo zakho, akunyanzelekanga ukuba uzise okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Venkataraman Chettiar